Ingabe izingxenye zebhayisikili zisemthethweni? - Izibuyekezo
Main > Izibuyekezo > Ukubuyekezwa kwengxenye yebhayisikili - isixazululo se
Ukubuyekezwa kwengxenye yebhayisikili - isixazululo se
Ingabe izingxenye zebhayisikili zisemthethweni?
Ziyi-ngokusemthethweningibe nokuphendula okuhle kakhulu kunoma yimiphi imibuzo evela kimi. Uma wenza ukusesha uzothola eminye imicu evumayo ngayo. I-VAT ngeke ifakwe uma usuphuma lapho uya khona e-USA.
Uma sithembekile, ukukhuphula izinga nokuhlinzeka ngebhayisikili lakho kungabiza kakhulu. Thatha la mathayi aphezulu we-High Roller II, isibonelo. Zimnandi, kepha uzosebenzisa imali ephakathi kuka- $ 130 no- $ 150 ngesethi eyodwa.
Kunezinto ezifana nale khasethi yamazinyo engu-11-50 evela kwa-SunRace ezonikeza ibhayisikili lakho ithani lobubanzi kodwa elizokhipha u- $ 100 esikhwameni sakho semali futhi njengamasondo azoguga ekugcineni. Kuyethusa, akunjalo? Kuthiwani uma ngikutshela ukuthi konke lapha kubiza mina ngaphansi kwama- $ 80? Hlala ubukele, ngizokukhombisa ukuthi ungonga kanjani ithani lemali ekuthengeni kwakho ibhayisikili okulandelayo. (umculo omnandi) Sanibona nonke, igama lami nginguJoseph futhi wamukelekile ngiyaqiniseka ukuthi iningi lenu liyazibuza ukuthi ngabe ngithengile yini izingxenye ezebiwe noma ngabe ngisebenzisa isivumelwano esikhethekile sokuxhasa ukuze konke kushibhile.
Impendulo ithi cha, ngizokukhombisa lapho ngizozitholela khona izingxenye ezintsha noma ezisetshenziswe kancane ngesaphulelo esikhulu. Manje uzodinga ukubekezela okuncane ukuze lokhu kusebenze. Eziningi zalezi zindawo zinezinto ezilinganiselwe ngakho-ke awudingi nje ukwazi ukuthi yini okufanele uyibheke, kepha kufanele uhlole izinto kaningi.
Kodwa-ke, uzoklonyeliswa ngokonga okukhulu. Kodwa-ke, lokhu akuyona indawo yomthengisi wakho oyintandokazi noma isitolo sebhayisikili sendawo. Udinga okuthile ngokushesha, sicela uyisebenzise.
Ngingathanda ukuthatha isikhashana ukukhuluma ngezingxenye ezisetshenzisiwe ngokujwayelekile. Akuyona imfihlo ukuthi ungathola amadili amahle ngamabhayisikili aphelele noma ngisho nakumafoloko angaphambili lapho uthenga lawo asetshenzisiwe ku-Pinkbike, eBay noma ku-Craigslist. Uma kushiwo lokho, udinga ngempela ukwazi ukuthi yimiphi imibuzo okufanele uyibuze nokuthi yini okufanele uyibheke ukuze uqiniseke ukuthi awutholi ingxenye embi noma uqedwa nje.
Noma kunjalo, umthengisi kwesinye isikhathi uthembekile ngokuphelele, kepha abaqondi nje ukuthi ingxenye yabo isesimweni esibi ukwedlula indlela ababecabanga ngayo. Ngakho-ke, kungcono ukushiya lolu hlobo lokuzingela abantu abafuna ukwazi ukuthi yimiphi imibuzo okufanele bayibuze nokuthi yini okufanele bayibheke, asiqhubeke. (umculo onamahloni) Ngenkathi iningi labantu lisebenzisa i-eBay ukuthenga izinto ezisetshenzisiwe, empeleni kuyindawo enhle yokuthenga izinto ezintsha ngesaphulelo esihle.
Futhi angikhulumi ngokuqhekeka kwamaShayina okushibhile okuzilimaza ngemuva kohambo. Iningi lezitolo zakho ozithandayo zamabhayisikili eziku-inthanethi nazo zithengisa imininingwane yazo ku-eBay eBay. Iningi lalezi zinto lithengiswa ngentengo efanayo ongayithola ekhasini labo eliyinhloko, noma kunjalo kunezinto ezinohlobo oluthile lokugcwala ngokweqile abakunikeza ngenketho yokunikezwa okuhle kakhulu kohlu.
Lokhu kukunikeza ithuba lokuthengiselana ngentengo ephansi, kepha ungafisi ukuvelela kakhulu - ngeke uthole isaphulelo esingu-50% kepha kungakusiza ukonga imali ezimbalwa lapha nalaphaya kuya ngokuthi into iyini Ngakho-ke I-mileage ingahluka, kepha kufanele uzame. Ngiphinde ngabona ukuthi izitolo eziningi ezincane zamabhayisikili zinezitolo ze-eBay ngemuva kwesitolo sazo ukuthengisa ngokweqile noma izinto ezivulekile. Baze babeka izinto endalini ngezikhathi ezithile, okuyisibusiso esixubekile ngoba uma kunguwena kuphela umuntu ofuna le nto ungathola okuthile ngesaphulelo esifanelekile.
Ngaphandle kwalokho uzozithola usempini yokubhida nabanye abantu abangama-50, futhi sikufisela inhlanhla. Ngingathanda futhi ukuveza ukuthi udinga ngempela ukunaka imigomo yokuthengisa. Abathengisi banamagama ahlukile futhi bangaba namatemu ahlukile ngokuya ngento.
Ngakho-ke funda incazelo futhi uma ungabaza, buza imibuzo eminingi ngangokunokwenzeka ngaphambi kokushaya inkinobho yokuthenga ukuze ugcine yonke inkinga. (I-Light disco music) Indawo elandelayo ohlwini lwami lokuthenga izinto empeleni inemali yokungena kepha kufanelekile ngokubona kwami ​​I-ExpertVoice yiwebhusayithi lapho ama-brand athengisa khona imikhiqizo yawo ngesaphulelo esihle kakhulu sempendulo nokuthola nje ukuvezwa okuningi . Kuthonya kancane online, kepha ngaphandle komuzwa ongenalutho wokuthengisa umphefumulo wakho ngemikhiqizo yamahhala.
Ngifisa sengathi ngingakukhombisa ikhasi eliyinhloko lapho ngingene ngemvume ukuze uzobona ngempela ukuthi yini etholakalayo, kepha kufanele ngicabange ukuthi lokhu kuphambene nemigomo nemibandela ngakho-ke ngizoyidlala iphephile. Engingakutshela khona, nokho, ukuthi kunemikhiqizo eminingi eyaziwayo laphaya, imikhakha yezingubo zangaphandle nezamabhayisikili, amadivayisi kagesi nezesekeli, izingxenye zebhayisikili namathuluzi amabhayisikili, ngisho namabhayisikili aphelele. Konke lokhu, kanti eminye imikhiqizo inikela ngesaphulelo esifinyelela ku-60%, okungeyona neze ihlaya.
Vele, kukhona izingqinamba kulokhu, ngakho-ke udinga ukubheka, kepha ngokuyisisekelo ukhawulelwe ekutheni ungathenga malini futhi kangaki. Njengoba lolu futhi luhlobo oluthile lokusetha inxusa lomkhiqizo, udinga ukwazi okungenani okuthile ngenkampani yabo, nemikhiqizo, ngakho-ke udinga ukuthatha lezi zifundo ezincane ezikwi-inthanethi bese uphendula imibuzo ekugcineni. Ngilapha ukukutshela ukuthi kulula kakhulu ukuzithatha, ungashaya ingqondo yakho kakhulu ngehora lesidlo sasemini ngakho ungakhathazeki, ngakho ungena kanjani? Une cishe $ 500 ngonyaka ukuze uthole okukhipha ubulungu? Empeleni cha, ishibhile ngokuhlekisa futhi ingaba mahhala ngandlela thile.
Lapho uba yilungu le-IMBA, i-International MountainBike Association, empeleni uthola ukufinyelela ku-ExpertVoice njengenye yezinzuzo zakho. Ubulungu ku-IMBA bushibhile njengo- $ 40 ngonyaka, futhi leyo mali iya emphakathini webhayisikili wezintaba wonkana. Kuyasiza ukwenza abantu balondoloze imizila bavule neminye emisha, futhi kungangenelela nakuhulumeni wasekhaya ukuthola umhlaba owengeziwe.
Isimo esihle kakhulu sokuwina konke kukho konke, akunjalo? Manje ungangena mahhala uma kuyisivumelwano ngomqashi wakho. Ngakho-ke khuluma nothile kwezokumaketha noma kwabasebenzi bese ubona ukuthi ungakwazi yini ukungena ngekheli lakho le-imeyili ngomsebenzi, noma uma kukhona ikhodi ye-id yokungena abayisebenzisayo. Akukaze kube buhlungu ukuhlola.
Ngaphandle kwalokho, ungathola kalula u- $ 40 ngonyaka emuva kwezinye izaphulelo ozitholayo. (Umculo odumile) Ekugcineni sesifanele sikwenze. Indawo engiyithandayo kakhulu kuze kube manje, futhi empeleni ilapha eColorado.
kungani izibuko zelanga ezimenyezelwe zenza uthingo
I Pros Closet kuyinto? iwebhusayithi lapho ungathenga khona amabhayisikili amasha futhi asetshenzisiwe nezakhi zebhayisikili ngamanani aphansi ahlekisayo. Empeleni ngithole amathayi amasha sha kaMaxis High Roller II lapha nge $ 14 lilinye, lokho kusangana. Ngibe sengithola ukuthi leli khasethi elisebenzisayo le-SunRace 11-50 ngamadola angama-48 okuyihafu yentengo yokuthengisa.
Manje sekukhona ukugqokwa kwezimonyo ngenxa yokuthi zifakiwe. Ngicabanga ukuthi lokhu bekuyisibonakaliso nje segumbi lombukiso njengoba amazinyo ngokwawo esebenza ngokufanele. kuhle kakhulu, ukutholwa okukhulu.
Uma uzibuza ukuthi bakutholaphi konke ukwakheka kwabo, empeleni kuxubile, kepha umnyombo webhizinisi labo uletha amabhayisikili asetshenzisiwe nezakhi ezitolo Ungakutholi lokhu kulinga ngoba uthola umbono wokuthenga esetshenzisiwe, ungathandi. Kulungile ngokuphelele. Kumele ngithi, noma kunjalo, i-Pros Closet ihlaba umxhwele kakhulu futhi bashayele inqubo yabo.
Laba bafana babheka konke okungena, bayaqinisekisa ukuthi amabhayisikili angeneyo awebiwe, futhi ahlanzeke kahle. Ngokwengeziwe, empeleni banabathwebuli bezithombe abangochwepheshe abathatha izithombe zakho konke. Lokhu kukuvumela ukuthi ubone kahle ukuthi yiziphi izinto ozithengayo abantu abazenzayo abazi ngazo.
Awuyona nje i-Yahoo engahleliwe eshaya ikhibhodi, laba bantu bahlala futhi baphefumula igiya lebhayisikili ukuze uthole izibalo ezinemininingwane eminingi. Eqinisweni, balinganisa yonke into eyodwa ukuze ubone ukuthi lelo sondo libiza malini kugram. Ngenye indlela, bathola inqwaba yezimpahla zabo ngokuya emabhizinisini anjengezitolo zamabhayisikili nabanye abathengisi abanokuningi kakhulu. bese uyithenga.
Lokhu kubavumela ukuthi bathathe iphalethi lamathayi kaMaxis bawathengise ngo- $ 14 nge-pop, ukuze uthole okuthile okusha ngentengo esetshenzisiwe noma eshibhile. Ngifuna ukuveza ukuthi banenqubomgomo yokubuyisa usuku lwamasondo engama-intshi angama-30, ngakho-ke uma uthola okuthile obekungeyona into obucabanga ukuthi awuyifakile ngokuphelele, kanye nenye into ongayisho, ngoba bagxile ekuhwebeni uma unokuthile okubiza kancane kepha unezimpahla zebhayisikili ezindala okudingeka uzilahle noma yini ezingasiza ukwenza le ndleko futhi zikusize wenze omunye wakho obalulekile ajabule kakhulu, ekugcineni ukhiphe ikhabethe eligcwele ibhayisikili izinto owawufunga ukuthi uzokwenza okuthile ngazo. Ngakho-ke unayo.
Ngazise emibhalweni engezansi ukuthi yini? ubulokhu ucabanga ngalo mbhalo futhi mhlawumbe ngiphuthelwe okuthile. Uma usithandile lesi sihloko, sinikeze isithupha futhi mhlawumbe usabe nomngane ofuna ukuthuthukisa ibhayisikili labo kulobu busika. Uma umusha ku. bayisiteshi, wamukelekile.
Kepha kuze kube yileso sikhathi, wonke umuntu, noma ngabe yiliphi ibhayisikili onalo, libambe bese ulisebenzisa ukuthola i-adventure yakho elandelayo. Ululame.
Zithatha isikhathi esingakanani izingxenye zebhayisikili?
Ngokuvamile, amaketanga amaningiokokugcinacishe amamayela angu-2 0003,000. Le nombolo iyahluka kuye ngokuthi ugcina i-drivetrain yakho ihlanzekile kangakanani, izimo zezulu ozigibela kuzo namandla akho okukhipha.
Yonke le nto yokuhamba ngebhayisikili entabeni ingabiza ngempela, ibize ngempela, ikakhulukazi uma uwuhlobo lomgibeli othanda amagiya akamuva, amahle. Futhi manje akukho lutho olungahambi kahle ngeqiniso lokuthi iXTR-Accessor ifuna isethi yamasondo ekhabhoni, kepha ngokuqinisekile awudingi noma yini yalokho ukuze ube nesikhathi esihle. Sivele senze i-athikili echaza ukuthi yini okufanele uyibheke lapho uthenga ibhayisikili elisetshenzisiwe. - $ 25 kuya ku- $ 50 kuya ngesitolo sakho, bhekisisa kahle. - Futhi ngizobuya ngizokhuluma ngokuthenga izinto ezisetshenzisiwe, kuyindlela ehlakaniphile yokonga imali.
Kepha namhlanje sizokhuluma nje ukuthi ungayisebenzisa kuphi imali nokuthi ungonga kuphi lapho uthuthuka ibhayisikili lakho ngokonga okukhulu futhi kunguhlaka lwakho, futhi lokho kungabamangaza abanye abantu ngoba kuyinto ebaluleke kangako. Ngicabanga ukuthi ucabanga ngebhayisikili lokumiswa eligcwele, okusho ukuthi kuzodingeka usebenzise noma yikuphi phakathi kuka- $ 1,500 futhi nangaphezulu kwama- $ 3,500. Ungaba neGrandon Ju emihlanu. okukhiphayo uhlaka kanye ne-damper uma ubufuna kuya ngezidingo zakho, ukuthi yenziwe kuphi nokuthi yenziwe ngubani nokuthi bathini kukhethekile. ifreyimu ye-aluminium, kahle-ke, kunethuba elihle lokuthi izosinda kancane kunohlaka lwekhabhoni, cishe iphawundi noma kunjalo, mhlawumbe nangaphezulu.
Ngabe iphawundi eyengeziwe noma isho amandla amancane kanjalo? Cha, hhayi emhlabeni wangempela wabantu abaningi. Kuthiwani ngokwethembeka? Esinokwethenjelwa, esithembekile, esithembekile. Ngokuvamile, ozimele be-aluminium babhekwa njengabanokwethenjelwa ukwedlula ozimele bekhabhoni engangibathola ngaleso sikhathi.
Futhi lokho kungaba yiqiniso uma uhlala endaweni enamadwala lapho lawo matshe engabhoboza khona kahle izimbobo kukhabhoni kalula nje njengokushaya izimbobo esikhunjeni sakho. Kulungile, nasi iseluleko sami, uma ungafuni ukusebenzisa imali engenangqondo ukwakha ibhayisikili le-flyweight, thola ifreyimu enhle ye-aluminium enejiyometri newaranti ezokusebenzela. Lokho kubaluleke kakhulu kunokuthi ngabe yenziwe ngekhabhoni noma i-aluminium, noma ngabe inesisindo esingamakhilogremu amahlanu noma ayisithupha nohhafu.
Masinamathele ekongeni imali futhi okulandelayo ngamasondo. Manje akufanele usebenzise imali engaphezulu kwesine noma engu- $ 500 entweni ethembekile futhi enobubanzi obulungile bomphetho. Ungachitha imali encane kakhulu, kepha la marimu avame ukuba mancane kakhulu futhi awasebenzi kahle ngamathayi anamuhla anomthamo omkhulu.
Futhi njengofreyimu wakho, kukhona ithani lezinkampani laphaya ezifuna ukuchitha imali enkulu kwizinsimbi zekhabhoni. Futhi yebo, amanye ala mabhayisikili ekhabhoni angathembeka kakhulu, kepha ekugcineni wonke abiza ngaphezu kwesondo elihloniphekile le-aluminium ongazikhweza ekhaya futhi wonge imali ethe xaxa. Ngokulandelayo sizophinde sikhulume ngamahabhu, ngoba sikhuluma ngamasondo futhi-ke futhi ungasebenzisa ithani lemali kumahabhu futhi. ezine, $ 500 nokukhuluma ngezinto ezinjengezifinyezo ezisheshayo namabhere abizayo nazo zonke lezo zinto ongazidingi.
Thola ihabhu ongazilungisa kabusha elisebenzisa amabhele ajwayelekile futhi angadingi amathuluzi akhethekile. Siyethemba ukuthi lokho kuphakathi kwesondo lakho, elibiza cishe ama- $ amane noma ama- $ 500. Ake sixoxe ngokuthi ungayisebenzisa kuphi imali yakho manje futhi kusekhefu lakho.
Ungahle usebenzise imali encane ngaphansi kwe- $ 100 kuya ku- $ 180 kulezi. Impela, ungawathenga la mabhuleki asebenza ngentambo ngama- $ 35, kungenzeka ukuthi awuhambanga kahle, ube nesikhathi esimnandi, mhlawumbe ungasindi kanye. Ngasikhathi sinye, awudingi ukuchitha u- $ 1000 kwezinye izaphulelo ezenziwe ngabenzi baseJalimane abachitha izinyanga ezimbili bepholisha ngaphambi kokukuthumela, yize lawo makhefu ehlaba umxhwele kakhulu; imali encane isho ukuthi uthola ukwenza ngezifiso okumbalwa.
Manje yonke into isazoba nokulungiswa kwebanga, ungahle udinge ukusebenzisa i-hex wrench, i-hex wrench encane, kepha ongakutholi ukulungiswa kwamaphoyinti lapho uphelelwa yimali futhi lokho kuyasiza ukugcina amabhuleki akho ebheke phambili azizwa ngendlela efanayo ngemuva. Kodwa-ke, uma ufuna ithambo elomile elomile, elenza amabhuleki aphezulu, funa i-piston brake eshibhile. Yebo, ngeposi lokwehlisa elizokubiza cishe u- $ 200.
Lokho kuzwakala kuyimali eningi manje, kepha ungachitha okuningi kakhulu futhi izinto sezingcono kakhulu kulezi zinsuku futhi. Bewusebenzisa imali engama- $ 500 ngokuyisisekelo unethemba lokuthi le nto izoqhubeka nokusebenza, okugcine kungasebenzi izinkampani ezimbalwa ezinikeza okuthunyelwe okunokwethenjelwa okuyiqiniso okuthi, noma kuphuka, kungalungiswa ngokushibhile. Izinkampani ezinjenge-One Up, i-SDG, i-X-Fusion, nePacific Northwest Components zonke zinezinsiza ezinkulu ze-telescopic ezingeke zehle ebhange.
Lapho ongakwazi khona ukusebenzisa imali ethile, imfoloko yakho yokumiswa izokubiza phakathi kuka- $ 5 kuya ku- $ 800 ukuthola okuthile, okufanele ukubheke njengokuthuthuka. Manje usungachitha okuningi kakhulu ukuthola amashubhu esiteshini segolide amahle noma izingxenye zekhabhoni fibre nokunye okudayayo okuningi ongakhohlwa futhi ongasoze wakwenza. Bheka imfoloko, okuyisinyathelo noma ezimbili kude nenketho ebiza kakhulu.
Imvamisa usathola i-damper yokusebenza okuphezulu noma okuthile, okungenani lokho kunokuthile okukwenza nayo. futhi lokho kubaluleke kakhulu. Iseluleko sami ukuzama i-Z2 ngama- $ 500 nge-damper yesitimela.
Itholakala ngamamilimitha ayikhulu kuya kumamilimitha ayi-150 wokuhamba futhi kuyisinqumo esihle uma ungafuni ukuchitha u- $ 000 ngemfoloko yokumiswa. Lapho ungonga khona imali, kahle, amandla akho okusebenza, okufanele akubize kahle ngaphansi kwama- $ 500. Kaningi, lapho ubheka ibhayisikili elisha lezintaba okuyisinothi noma amabili kude nemodeli ethandekayo, uthola ukumiswa okuphezulu noma amasondo amahle kodwa i-drivetrain engabizi kakhulu.
Lokho kungenxa yokuthi i-powertrain yakho ayinandaba, ngiyadlala. Kepha uma isethwe kahle futhi unamagiya ayi-12 nobubanzi, lokho kusho ukuthi unazo zonke izinto ozidingayo ukwehla nokwehla entabeni futhi ube nesikhathi esimnandi. Ake sikhulume ngoShimano kuqala kanye neqoqo labo le-Deore le-12-speed alizange lihehe kakhulu futhi lithembeke ngaphansi kwama- $ 300.
Yize i-micro-spline freehub ingeza namarandi ambalwa. Ibhange ngeke ligqekeze ibhange ngale ndlela engu- $ 375 NX drive. Uma ungawadingi wonke la magiya, ungahle usebenzise imali encane kakhulu, iMicro Shift isanda kukhipha i- $ 83 Acolyte drivetrain yayo.
Iyidrayivu yesivinini esinezivinini eziyisishiyagalombili, eyindandatho eyodwa, kanti isiphazamisi sangaphambili sisebenzisa i-clutch nge-off-switch ukuze ukwazi ukuyinqamula ukuze kube lula ukukhipha isondo. Unezinketho ezimbili zekhasethi, kungaba kusuka ku-12 kuye ku-42 noma kusuka ku-12 kuye ku-46 kusengaba ibanga elide ngokwanele ukukhuphuka amagquma amaningi. Ukonga imali, i-cockpit yakho ingakubiza ngaphezu kwe- $ 150, kufaka phakathi amaphuzu okuthinta.
Futhi ngiyazi ukuthi ungachitha imali eningi kakhulu nje ngesiqu esenziwe ngomshini iKobolds ngaphansi kwenyanga egcwele, noma ungachitha u- $ 35 ngesiqu esenza into efanayo futhi sinesisindo esingamagremu ayisikhombisa ngaphezulu. Uyazi noma yini. Okufanayo kuya kuma-handlebars, ungachitha u- $ 200 noma ngaphezulu ukuthola okuthile okwenziwe nge-carbon fiber okukhanya futhi okusho ukuthi kunohlobo oluthile lokudlidliza, ukuncipha, nezakhiwo.
Noma, ungachitha u- $ 50 uye ku- $ 70 ukuthola isibambo esihle se-aluminium ngejometri oyidingayo enkampanini enedumela elihle bese uyahamba uyosebenzisa imali yakho ezintweni ongeke uzigodle, futhi ezinokwethenjelwa. Sazise kumazwana angezansi uma uvumelana nezincomo zethu noma siyodla. Manje, awudingi ukuchitha ngaphezulu kwama- $ amane noma ama- $ 500 ukuthola okuthile okunengqondo, akunangqondo ukuthola okuthile okuthembekile.
Yiziphi izingxenye zebhayisikili?
Okuyinhlokoizingxenyekweibhayisikiliamasondo, ifreyimu, isihlalo, imigoqo yokubamba, kanyeizingxenye. Futhi singabheka isigqoko sokuzivikela njengenkinga ebalulekile yokuphepha. Amasondo anikeza injongo eyisisekelo ku-ibhayisikili; yingakho sikubiza ngokuthi yi-bi (okusho okubili) futhiumjikelezo(okusho ukujika).
Leli ibhayisikili lasentabeni, futhi inhliziyo yanoma iliphi ibhayisikili luhlaka lwayo. Ake siqale ngezingxenye zozimele. Lawa ishubhu ephezulu, ithubhu phansi, ithubhu yesihlalo, ukuhlala kwesihlalo nokuhlala kweketanga.
Indawo engezansi ibizwa ngegobolondo lobakaki elingezansi. Ngaphambili impela kwebhayisikili lakho kukhona ithubhu yekhanda, lapho kutholakala khona ishubhu lesithutha. Lokhu kuhamba ngokushelela sibonga isethi yamabheringi namabhere, ngokuhlanganyela aziwa njengehedsethi, nesiqu.
Isiqu, esibopheleke kwi-handlebars, sinamathiselwe kushubhu elishintshayo ngentambo nezikulufi zokuqinisa. Ku-handlebars yakho uzothola izigaxa zamabhuleki, ama-shift levers, Izibambo, nama-plugs wokugcina; konke lokhu okungenhla ngokuhlangene kubizwa ngokuthi yi-cockpit. Imfoloko yakho, kulokhu okuyimfoloko yokumiswa, iya phansi.
Le phezulu ibizwa ngokuthi umqhele. Amanye amabhayisikili anemifoloko ephindwe kabili yomqhele yokusimama okwengeziwe. Umqhele uphethe ama-stanchion akho, okufanele uzame ngawo wonke amandla ukuthi ungaklwebhi.
Ungalengisi ibhayisikili lakho nge-kickstand kuma-chions. Ngezansi kwe-caliper yakho ehlala kudiski yakho lapho ucindezela i-lever brake. Amanye amakhalipha ayimishini, amanye anama-hydraulic.
Amabhuleki we-Hydraulic acindezela uketshezi ngepayipi, kuyilapho amabhuleki ayimishini edonsa okhalayo ngentambo Ibhayisikili elilinganiselayo yinto eyindilinga. Uma uthenga isondo langaphambili nangemuva ndawonye, ​​ibizwa ngevili. Zonke izingxenye zamasondo akho zibanjiwe kanye nezipikha ezifakwe erimu lakho yilabo bafana abancane.
Babizwa ngezingono. Umphetho uyisiqu se-valve esisetshenziselwa ukupompa umoya kumasondo akho. Maphakathi ne-impeller kukhona ihabhu futhi kukhona amabheringi kuhabhu.
Ihabhu leli lizungeza i-eksisi. Emabhayisikili amaningi asezintabeni, lokhu kunesimo se-thru-axle esingasuswa noma sifakwe ngesandla. Ihabhu lekhasethi esondweni elingemuva.
Umshini we-ratchet wakhiwe kulokhu, okwenzelwe ukufaka ikhasethi. Ikhasethi liyiqoqo lamagiya angashintshwa empeleni ngokuthanda. Ubukhulu begiya ngalinye buchazwe ku-t. kulinganiswe inani lamazinyo elinalo, futhi la mazinyo aklanywe ngokukhethekile ukusebenza ngeketanga.
Iketanga lakho liqukethe izixhumanisi ngazinye, ngesixhumanisi esisodwa ngokukhethekile kube lula ukukhulula. Lokhu kubizwa ngokuthi isixhumanisi sokulenga. Iketanga lingagudlulelwa phezulu nangaphansi kwekhasethi ngomshini oshayeke ngebhayisikili ngesiqeshana esincanyana, esintekenteke esibizwa ngokuthi isiphanyeko sasesidini.
uhlelo lokuqeqeshwa ngamabhayisikili
Uma isiphanyeko sakho se-derailleur siqhuma noma sigobile, ungathola nje okusha kwekheji elizobamba ukungezwani kuketanga. Leli chungechunge ligijima nge-pulley engenhla ne-pulley engezansi, eyaziwa nangokuthi i-jockey noma i-pulley. Uma uthuthela kugobolondo lobakaki ongezansi, uzothola i-crankset yakho, izingxenye ezibonakala kakhulu ziyikhrankethi.
Izingalo ezincanyana zinanyathiselwe entanjeni yokuphotha, ehamba ngeqoqo lamabheringi angaphakathi kwegobolondo lobakaki elingezansi. Uthi lokuphotha kanye namabheringi kubizwa ngokubizwa ngokuthi ubakaki ongezansi. Ingxenye enawo wonke amazinyo ibizwa ngokuthi yi-chainring.
Amanye amabhayisikili anezi-3 zazo. Ekupheleni kwezingalo ezi-crank kukhona ama-pedal angatholakala ngezimo eziningi ezahlukene. I-crankset, i-chain, i-derailleur, ne-cassette yaziwa ngokuhlanganyela njenge-drivetrain yakho.
Ebhayisikili eligcwele lokumiswa lezintaba, uzothola izinto ezahlukahlukene ezixhuma amasondo angaphambili nangemuva ebhayisikili, abizwa ngokuthi ama-suspension linkages. I-centerpiece yisidambisi sakho. Lokhu kuvame ukunamathiselwa ekuxhumaneni nashubhu ephezulu ngakolunye uhlangothi, noma ishubhu phansi ngakolunye.
Phezulu sinesihlalo noma isihlalo. Amagama womabili ayashintshana, kepha abanye abantu bacabanga ukuthi kuwukugabadela ukukubiza ngokuthi isihlalo. Ngokwami, anginandaba nokuthi uyibiza kanjani inqobo nje uma uyenza. t lungisa abanye abantu.
Kunoma ikuphi, lesi akusona isigxobo sesihlalo, kodwa okuthunyelwe kwesihlalo, futhi sinamathela kubhayisikili lakho ngocingo noma ukhololo. Kulezi zinsuku, izikhala eziningi zezihlalo zingalungiswa endizeni. Lokhu kubizwa ngama-dropper posts.
Ngakho-ke ngisanda kukhuluma ngezingxenye ezingaphezu kwezingama-50 zebhayisikili elisentabeni, kepha zonke lezo zingxenye zingahlehliselwa emakhulwini ngaphezulu. Ngakho-ke, bhala le migomo kumazwana futhi uma unesithukuthezi ngempela bona ukuthi ungathola yini inani eliqondile lamagama engiwasebenzisile kule ndatshana yokuthi ungabiza kanjani i-derailleur. Ingabe ungomunye walabo bantu abathi 'derailleur'? Kunoma ikuphi, ngiyabonga ngokushayela nami namhlanje, sizobonana ngokuzayo.
Kufanele ilungiselelwe kangaki ibhayisikili?
Ngemuva kwamahhalainsizaIsikhathi siphela, abasebenzisi abaningi bazodlulela phambili ukuze batholeinsizakusuka kumakhenikhi athenjiwe endawo, alula futhi ashibhile kubanikazi. Futhi, kuleli phuzu, umuntu akadingi ukunamathela kokuqinile kakhuluinsizaizikhawu. Noma kunjalo,ukusevisaeyakhoibhayisikilinjalo ezinyangeni ezi-2 noma i-2,000 KM ihlala ilulekwa.
Leli sonto liyisiqephu esikhethekile esenzelwe ukunakekelwa. Ungabona lapho sesithuthele kwenye indawo futhi nokuthi ngigqoke iphinifa.
Yebo yebo, lokho kusho ukuthi amahora webhizinisi, lokho kungaxaka. Kulungile, into yokuqala sithole umbuzo ku-Andrew Reitsma mayelana nokuthambisa. Ngakho-ke uthi 'Sawubona kusuka ku-Down Under'.
Abantu abaningi banenkolelo eqinile yokuthi kufanele banakekele amaketanga abo, futhi lokhu kuyingxenye ebalulekile yebhayisikili.
Kepha ngicabanga ukuthi kungenzeka futhi ukucabanga kabusha ngezinto. Uma uzama ukuthola amakhilomitha angamakhulu ambalwa wempilo ngaphandle kochungechunge lwakho, kungahle kungakulungeli ukucabanga ngakho. Kepha kukhona okumele kwenziwe nokungafanele ukwenze.
Imvamisa bengithi phinda ushintshe iketanga lakho uma lomile futhi linomsindo, kepha uma kungenjalo angizikhathazi. Futhi-ke, maqondana nokwehliswa, ngingahle ngibukeke njengaleyo Chain kwizixhumanisi, ngakho-ke, iphakathi kwama-roller. Ngoba kulapho iketanga liguga khona, futhi uma ligcwele amachaphaza nesihlabathi nokunye okunjalo, yilapho ofuna ukuyihlanze khona ize icwebezele njengokusha.
Nakanjani kufanele ucabange ukuthi uluhlobo luni lwe-degreaser oyisebenzisayo - ungasebenzisi izincibilikisi eziqinisa kakhulu, ezine-asidi noma i-alkaline a) Lapho-ke lokhu akukuhle kakhulu empilweni yeketanga lakho. Abakhiqizi abaningi bangasho ukuthi nakanjani uzohlehla. Kepha i-degreaser ejwayelekile eqondene nebhayisikili izowenza kahle umsebenzi wayo njalo.
Kepha ayikho imithetho ngoba ekugcineni kosuku lapho ushayela khona kungahluka kunalapho ngishayela khona ezimeni ezomile. Futhi uyazi, njengoba ngishilo, akunakwenzeka ukunikeza inombolo ngqo, kepha ngethemba lokho kuyasiza esigabeni sokuphawula ngezansi. Ngakho-ke, ngokulandelayo.
Le siyithole kuTomKrouze. Igama elipholile, uTom. 'Yini empeleni inzuzo noma ukubaluleka kokuqina “Ebhayisikili? Ngidinga nini ibhayisikili eliqinile? ”Yebo, lowo ngumbuzo omuhle impela.
Abantu ngokujwayelekile bacabanga ukuthi ibhayisikili eliqinile libalulekile ekudluliseni amandla, ngakho-ke uphusha ama-cranks futhi wonke amandla aya ngqo esondweni langemuva ngoba ibhayisikili aliguquki. Kodwa-ke, lokhu kushaya indiva iphuzu elibalulekile lokuthi ngokuvamile awekho amandla alahlekayo kulolu hlelo. Ngokusobala amandla awakwazi ukulahleka, avele adluliselwe kwenye indawo.
Ngakho-ke, ithiyori, uma ibhayisikili lakho liguquguquka, lokhu bekungeke kukunikeze amandla ngandlela thile. Ngakho-ke lelo iphuzu elilodwa engiqagelayo. Kepha amabhayisikili aqinile azizwa engcono ngokuya ngamandla kagesi.
Kepha empeleni ngicabanga ukuthi amabhayisikili aqinile anikela impela maqondana nokuphathwa. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi isiphetho esiqinile sangaphambili sebhayisikili lakho kuyinto enhle kakhulu yokwenza ibhayisikili lizizwe lihle lapho ubheke ekhoneni. Kepha ngokuqinisekile akubalulekile.
amaprotheni powder ngaphandle kwe-carrageenan
Ungahamba ngokushesha okukhulu ngebhayisikili eliguquguqukayo. Kulungile, ngokulandelayo sinoHaziq Annies, 'Ingabe ubakaki ongezansi uyashintshana?' Ngabe i-crankshaft engama-24 mil 'ingangena ku-BB30 ngama-adaptha ambalwa?' Yebo kungenzeka. Unayo lapha ngicabanga.
Kulungile Ngakho-ke, i-FSA yenza ama-adaptha amancane. Ngakho-ke lena isuka kubakaki ongezansi we-BB386EVO, i-oreah, futhi izokwehla, lokhu kwenzelwa iSrams GXP ngqo, ngakho-ke lesi yisiphungulu semil 20 esicabanga. (22mm & 24mm) Bheka ku-inthanethi, ama-adapters ayatholakala impela, kepha akubona bonke obakaki abangaphansi abangahle bakwazi ukuzivumelanisa nazo zonke izinhlobo ze-crank.
Ngakho-ke qhubeka ngokucophelela. Kepha, yebo, kukhona ongakwenza. Kulungile, ngokulandelayo sinalokhu okuvela kuPatrick Joseph. 'Cishe zonke izitolo zamabhayisikili zikutshela ukuthi' ubuyise ibhayisikili lakho elisha ngemuva kwamasonto ambalwa ukuze uphinde ususe amagiya ', ingabe lokho kuyizaba zokukuthengisela izinto eziningi?' Cha, akunjalo neze.
Izintambo, ake sithi ziyazelula, izintambo ngokwazo aziluleki, kepha lonke lelo cala nezinto zingancipha futhi lokho kungavimbela amagiya akho kancane futhi nokuyinto okufanele yenziwe ekhaya. Sinendatshana enhle ngale ndaba. Futhi empeleni sidlala okuncane manje.
Yebo, uma i-derailleur yakho engemuva ingekho ngaphansi kwayo ngqo, vula i-Cogin uma ushintsha amagiya, khona-ke amagiya ngeke akhonjwe. Yini ngasikhathi sini, bese kuthi lapho zihamba kabi khona. Futhi kuyinkomba yokufaka izinkomba ukulungisa lokho bese uhambisa i-derailleur endaweni.
Ungayilungisa kalula kalula. Kulungile, sinombuzo owodwa omuhle impela ngaphansi kwe-athikili ye-youtube yangesonto eledlule, lena evela ku-leecbracing, noma i-lee cb racing, engaqiniseki ukuthi yimuphi. Kunoma ikuphi, babuza: 'Kungani ochwepheshe behlala phambili kangaka?' Ngokuyinhloko ngoba uma uzoba nolaka kakhulu futhi usheshe kakhulu emigwaqweni eyisicaba, impela ufuna ukujula kakhulu.
Futhi lapho ujula impela, kusho ukuthi izinkalo zakho ziyajikela phambili, ngakho-ke, ukuze uhlale ukhululekile futhi ukhiphe amandla ngokuqhubekayo, uzofuna nokushelela phambili. Empeleni akuyona into entsha. Sekuyisikhathi eside kakhulu futhi empeleni siyisizathu esenza ukuthi sibe nesigwebo kokubi.
Okuyinto yakho enhle mayelana nokuhamba ngebhayisikili, kuvela ngesikhathi lapho izinsimbi zaxoshwa khona futhi abantu ababehleli esihlalweni baqhubekela phambili bahlala ngokoqobo ku-rivet ngaphambili lapho, okusha sha manje ukuthi izikhundla ziyajula futhi enwetshiwe ngaphambili ukuze izihlalo ziqhubekele phambili futhi zithambekele phansi. Futhi uMatt unendatshana enhle ngempela ngempela kuTour of Dubai yakamuva futhi idlala ngomzuzwana, kufanelekile ukufunda okwengeziwe - izinzuzo zaziwa ngezikhundla zabo zokugibela ezi-slammy, kepha muva nje kunomkhuba owandayo wokuqisa. (umculo othambile) Yebo, uma ucabanga ngalokho, ibhayisikili lami liqinile futhi ngalokho ngiqonde ukuthi kunomehluko omkhulu phakathi kwesibambo nokuphakama kwesihlalo, njengasemjahweni wami bese uliqhathanisa nesimo esinolaka kakhulu sikaJohann van Zyl futhi uzokwazi ukuthi ngiqonde ukuthini.
Manje sesikhulume nabashayeli abambalwa mayelana nokuthi kungani bebonakala bethatha izinto ngokweqile. - Kulungile-ke, isikhathi esisheshayo semibuzo nezimpendulo manje. Njalo cishe yingxenye ehamba kancane kunayo yonke i-athikili, kepha njengoba u-ThatsSoNathan ephawule ngesonto eledlule, 'Isilinganiso Sesivinini Incazelo Akunandaba' ngesikhathi se-Rapid Fire Q&A. 'Ngakho-ke, ngiyabonga ngalokho, Nathan.
Umbuzo wokuqala, uLiam Bradley. Yebo, unenkinga ngesondo lakhe langemuva. Kwesinye isikhathi lapho ehambisa futhi eqhubekela phambili, kusebenza kahle.
Kwesinye isikhathi izingalo ezinyakazayo ziyazula nje kungenzeki lutho, yini engalungile? Hhayi-ke, lokho kuyisikhalazo esivamile lapho isondo lakho langemuva liguga impela futhi liyi-freewheel futhi likuvumela ukuthi unganyatheli uphume bese uyahamba futhi. Ngokuyisisekelo, zingavinjelwa kancane nge-gunkand kanye ne-crap ejwayelekile ngokuhamba kwesikhathi, ngakho-ke kunjalo izingcezu ezincane zentwasahlobo ezikuvumela ukuthi umise ukukhipha, ngamafuphi. Amathuba wokuthi ungayilungisa, ngakho-ke udinga ukubheka iwebhusayithi yomkhiqizi wakho ukuthola imiyalo, kepha kunethuba lokuthi i-freewheel yakho ingahle ingalungiswa ngakho-ke ingahle ibhajwe uqiniseke ukuthi uhlola ku-inthanethi kuqala.
Iningi lamabhayisikili e-freewheel esinawo lapha e-GCN-Bikes ngicabanga ukuthi angalungiswa. Ngakho-ke ngethemba lokuthi unenhlanhla. Nginesiqiniseko sokuthi kuzoba nguwe.
Kulungile, manje sesinenye evela ku-oreosaysb00, lelo yigama elingajwayelekile manje. 'Kungani ochwepheshe begibela ngamathayi angama-25c uma wonga ama-watts amabili kuya kwamathathu ngesondo ngalinye elinamasondo angama-28c?' Yebo, omunye umuntu angakuphendula kahle lokho: uLennart Meinke, othe: 'Kancane futhi kuyinkambiso enkulu.' Futhi ngizokutshela okuthile, empeleni lokho akukude neqiniso.
Kwesinye isikhathi kuthatha isikhashana ukucabanga kwesayensi ukungena empeleni kwiProoton Peloton. Ngoba ekugcineni kosuku, ukuthi into izwa kanjani nokuthi abantu bacabanga ukuthi kubaluleke kakhulu kanjani, futhi. Futhi izinzuzo eziningi zikholelwa ukuthi ama-28s ahamba kancane kunama-25s, noma ngabe idatha ingasho okunye.
Kodwa-ke, ama-28s asinda kancane kunama-25s futhi angaphansi kwe-aerodynamic. Ngokusobala kunendawo eningi yokugqobhoza umoya. Kepha ngiyasola ukuthi sizobona izinzuzo zisebenzisa ama-28s amaningi, ikakhulukazi njengoba amasondo ebanzi nawo.
Ngokusobala, lokhu kususa ezinye zezingqinamba ze-aerodynamic. Kulandela lokho sinombuzo ovela kuma-Amaury lapha owathi usanda kuthola iCanyon Aeroad entsha yokugibela okusheshayo Shesha, uncoma ini ngobukhulu bamathayi, ama-25 noma ama-28 mil, i-Continental GP 4000sII? Hhayi-ke, uma unikezwe engisanda kukusho, ama-28s azongena kahle futhi uma ugibela itiyela elibi kakhulu, elicasulayo ku-50 psi lapho ibhayisikili lakho lizoqengqeleka njengokhaphethi womlingo futhi uzohamba ngokushesha okukhulu. Kodwa-ke, uma ushayela ku-asphalt ebushelelezi ne-aerodynamics iyikho konke futhi ijubane lakho elijwayelekile liphakeme kakhulu, khona-ke ungahle ufune ukuya ku-25c, kepha nakanjani ngizohamba ne-28con, nakanjani.
Kulungile, ngakho-ke manje sinemibuzo eminingi futhi, yonke ehlobene. Ngeshwa, uDan Fish uqeda nje ukuphula ithambo lakhe futhi ufuna ukwazi ukuthi angamsebenzisa kanjani iTurbo Trainer yakhe ukugcina ukuqina akuyo ngenkathi esenesikhathi sokululama. Ngakho-ke nakanjani ngomqeqeshi we-turbo futhi awudingi nokuthi uchithe isikhathi eside kakhulu kuyo.
Bheka izingobo zomlando ze-GCN, izikhathi zokuqeqesha. Futhi uma ngabe wenze omunye wemizuzu yethu engama-20 noma engama-30 njalo ngosuku, uzothola ukuthi uhlala ulungile. Kuyamangaza ukuthi kuncane kangakanani okufanele ukwenze ukuze uhlale uphilile, noma ngabe kunzima kakhulu ukuzilolonga nhlobo.
UStephen Cummings unqobe iBritish National Road Race Champs kanye neBritish National Time Trial Champs ngempelasonto ngemuva kokungashayeli ngaphezulu ngeminyaka ngoba ulimale kabi ngemuva kokuwela kwiTour of the Basque Country. Futhi wakwenza konke ukuqeqeshwa kwakhe eZwift cishe kuze kufike kwaboHlanga ngokwabo, empeleni. Kufaka nokugibela okuhle kwe-punchy ngamahora amane kanye.
Ngakho-ke uma wena noma ungenayo leyo ndlela nomqeqeshi ohlakaniphile, okudingayo izinzwa ezimbalwa nje, mhlawumbe uZwift angaba yimpendulo yakho nge-collarbone ephukile njengoba kwenza ochwepheshe abaningi njengamanje. Xhumanisa ngokuhlanzekile embuzweni olandelayo othunyelwe nguSanresh Shedekar othi i-FTP yakhe emgwaqweni ngama-watts angama-245 kepha kuZwift i-FTP yakhe yehlela kuma-watts angama-205, uhlupheka kakhulu, singamtshela ukuthi kungani? Yini okufanele ayenze? Yebo, kunezizathu eziningana zokuthi kungani i-FTP yakho iphansi ngokujwayelekile, kepha esinye sezikhulu empeleni ukushisa ngoba imizimba yethu ayikwenzi lokho uma ushisa kakhulu futhi ngaphandle kwemiphumela yokupholisa yomoya noma ngeyodwa ngempela fan omuhle phambi kwakho, uzothola ukuthi i-ftp yakho kungenzeka igqoke kancane. Ngakho-ke yingakho.
Ungazama ukuqeqeshelwa indawo enomoya, nabalandeli abaningi, lokhu kuzosiza impela, kepha inqobo nje uma uziqeqesha futhi uzihlole endaweni efanayo. Ngakho-ke uma uyihlola njalo ngaphandle noma ngaphakathi njalo, empeleni akuyona inkinga uma ihlala ingama-watts angama-35 ngaphakathi ngaphakathi. Kungukuthi uyazi ukuthi kungenxa yokuthi uyashisa futhi ungavele ukushiye lapho.
Kepha umbuzo wokugcina oxhunyiwe, usukulungele lokhu? Kulungile B. URyder uthi, 'Sonke sizwile ngokuqeqeshwa kokuphakama kukhona into efana nokuqeqeshwa kokushisa? 'Yebo ikhona. Yebo, ungazivocavoca ukuze ube ngcono lapho kushisa.
Ngakho-ke uma uhlala endaweni ebandayo futhi emanzi yasemaphandleni eNgilandi, ngokwesibonelo, kepha uqeqeshela umcimbi owenzeka ezweni elihle, elishisayo nelinelanga, lokhu kuzoba umqondo omuhle impela ukuthola ukushisa kuvunyelwe ngaphambi kokuba uhambe. Futhi akudingeki wenze okuningi kakhulu. Ngakho-ke ngenkathi ngigijima ngatshelwa ukuthi ngenze umsebenzi wokuzivocavoca nge-turbo, hhayi ngamandla, ngishayele nje, kodwa egumbini elishisa kakhulu, elinomswakama.
Mhlawumbe ngisho nokugeza kwakho. Ngicabanga ukuthi uMat wakwenza kanye egalaji lakhe. Futhi inqobo nje uma ujuluka, kwenze ihora elilodwa ngosuku, izinsuku ezinhlanu usuku ngalunye ngaphambi kokuhamba, lokhu kufanele kukuhambisane nokushisa.
Ngakho-ke qhubeka, uqeqeshe ukushisa. Ilungile. Kwenzeka kanjani lokho nge-Quickfire ngaleso sikhathi? Mhlawumbe hhayi ukushesha okungako, kepha ngethemba ukuthi imibuzo iphendulwe kahle.
Futhi ngicabanga ukuthi lelo phuzu. Singahlala sikuqamba kabusha, sikubize ngokuhlukile. Okulandelayo, sinombuzo ovela kuGabriel Blanchfield.
Une-creak eyinqaba endaweni ye-crankset yayo, akukho monakalo obonakalayo, isondo ligcinwa kahle futhi livela kuphela uma liseringi enkulu. Ngiyazwelana nawe ngoba ukuthola amasondo we-creaky kungaba inqubo ekhathazayo. Kahle, ibhayisikili likaLasty lilenga eduze kwami.
Ngakho-ke, uma iqhuma lapho usendandeni enkulu, kungenzeka ukuthi kungenxa yokuthi ubeka nje torque ethe xaxa ngebhayisikili ngakho-ke iyakha. Kungaba ngamabhawodi wakho wamaketanga, ngakho-ke ngingahlongoza ukuthi ubheke la, uqiniseke ukuthi wonke aqinisiwe. Yize bengajwayele ukwenza umsindo we-creaking, bathambekele ekwenzeni umsindo wokuchofoza njengoba benza.
Kungaba ubakaki wakho ophansi, kodwa ngaphambi kokuba wehle lo mzila bese uya ngaphesheya, ngingahle ngiphakamise ukuthi ubuke i-athikili esinayo mayelana nokuthola ukuqhuma ebhayisikili lakho. Sibe sesifanele ukwenza okunye okuningi ku-athikili, ngoba kunezimvume eziningi ezahlukahlukene. Isibonelo, ngibe ne-creak eyenzekile.
Nganginesiqiniseko sokuthi yayivela emakhazeni ami futhi njalo lapho ngehla esihlalweni kwavela ukuthi kwakungukukhululwa kwami ​​ngokushesha. Angikudlalisi, kodwa asihambe. Kulula kakhulu ukusebenzisa kunabakaki abaphansi.
Noma kunjalo, i-athikili iyadlala njengamanje, yihlole. Ibhayisikili elichofozayo, elikhalayo liyacasula kakhulu, futhi i-esand ngokuvamile ingakonakalisa ukuhamba kwakho. Alikho ibhayisikili elingavikelekile esiqalekisweni, ngisho nezithuthuthu eziphezulu kakhulu zisengozini.
Manje, ngaphezu kokonakalisa ukuhamba kwakho, kungaba uphawu lwento ebucayi kakhulu. Isibonelo, lapho i-carbon yonakele futhi isizokwehluleka, ingakhipha umuzwa omkhulu. Ngakho-ke kuhlale kungumqondo omuhle ukunaka umsindo, noma ngabe ungakwazi ukumela umsindo.
Random Bike Trips ubuze umbuzo omuhle impela embukisweni wesonto eledlule. 'Yini indawo ekahle noma i-angle yokulungisa izibambo zakho? ezithambekele kancane - kanti ezinye zihlehlisiwe - kahle, okuningi kuncike ekubunjweni kwama-handlebars akho, kodwa futhi nakwintandokazi yakho. Futhi empeleni, kungashintsha ngokuhamba kwesikhathi.
Imayini impela inayo. Ebhayisikili likaLasty lapha, kukhona isibambo esihlanganisiwe nesiqu. Ngakho-ke akanakho ukukhetha futhi uyabona ukuthi uTrek uthathe isinqumo sokuthi leli yi-engeli efanelekile.
Futhi empeleni nami bengizokwenza lokho. Izinto ezimbili ongafuna ukuzibheka. Okokuqala, i-angle ye-handlebars eceleni kwekhava lakho lamabhuleki.
Ngakho-ke, uyayithanda uma yehla noma uthanda ushintsho olubushelelezi? Iningi labantu manje livame ukuba nenguquko ebushelelezi. Enye into ukuthi, ungakwazi yini ukubamba kahle amathonsi? ukuthi kufanele kube khona i-engeli enethezekile ezihlakaleni zakho. Ngakho-ke, ngokuvamile, awufuni ukugoba izihlakala zakho kakhulu njengoba kungazithokozisa isikhathi eside.
Kuphakathi phezulu noma phansi, uhlobo olunjalo. Ngokuvamile, ufuna ukuthi izihlakala zakho zibe sesimweni sokungathathi hlangothi ukuze ushintsho olusuka kuma-handlebars ethu uye ku-brake hood yakho lukhululeke. Sinendatshana ekhuluma ngale ndaba okunikeza imininingwane ethile.
Ngingakuzama manje. Iphuzu lokuqala esizolimboza ububanzi be-barbar. Yebo, izibambo zomgwaqo zivame ukufika ngosayizi ukusuka kuma-intshi angama-38 kuye kwangama-46 ububanzi.
Imvamisa, ungakhetha izibambo zakho ngokususelwa kubude bakho. Ngaphandle kokuthi ukuphakama akuhlangene nakancane nakho, empeleni ububanzi bamahlombe akho. Ama-handlebars anobubanzi obulinganayo nebanga eliphakathi kwamajoyinti akho e-AC.
Lezo izingxenye ezigayiwe emahlombe akho. Ngakho-ke lapho ugcina izibambo zakho zisehla, amaqakala akho asuke engekho olayini wehlombe. Ngiwuphendulile umbuzo wakho.
Vele, uma bengingakafiki ukuphendula umbuzo wakho kuleli sonto, qiniseka ukuthi uwubuyisele esigabeni sokuphawula ngezansi. Futhi uma unombuzo omusha noma umusha kulo mbukiso bese uthumela imibuzo yakho esigabeni sokuphawula ngezansi noma ezinkundleni zokuxhumana nge- # TorqueBack. Manje ngaphambi kokushiya le ndatshana qiniseka ukuthi ubhalisela i-GCN.
Kulula, mane uchofoze embulungeni bese, uma ufuna okuqukethwe okwengeziwe manje, mane uchofoze kukho ukuthola uhlelo lwethu lokubuka kuqala lweTour de France, ngoba luqala kusasa, noma mhlawumbe mhlawumbe uma usubuka le ndatshana, zigcine usuku. Futhi-ke, nge-classic kaDan noMat, izindlela eziyisishiyagalolunye zokuphuza ebhodleleni lakho lamanzi. Ubani owayengacabanga ukuthi kwakungaphezu kweyodwa? Vele uchofoze phansi lapho.
Ungafaka amamayela amangaki ebhayisikili?
Eminye imithombo ithi 'isilinganiso'isithuthuthuukusetshenziswa kuphakathi kuka-2 000 no-3,000Izinkulungwaneunyaka, ngeamamayelaekubukeniamabhayisikilikwabangu-5 000 kuya ku-6 000imayelaububanzi. Nakhu ukuthi kungani kunjalookuningiokuningi ukuthenga okusetshenzisiweisithuthuthukunokuba njeamamayela: Umgibeli omusha uthenge iSportster esisha wagibelaitkanzima unyaka wokuqala.10. 2019.
Ingabe ukuhamba ngebhayisikili kukunika isisu esicabalele?
Yebo!Ibhayisekili lingakwenzaUsizowenaukuthola i-isisu esicabalele. Kephaungakwazishisa amanoni ku-bulge byukuhamba ngebhayisikili.Ukuhamba ngebhayisikilikuyinto Amazing amangalisayo ikhalori-esivuthayo abantu 130-amakhilogremucanshisa cishe ama-calories ayi-600 ngehora elilodwa lokugibela umjikelezo onamandla.
Ngabe insizakalo ephelele yebhayisikili ifaka ini?
I-insizakungenzeka kakhulufaka phakathiushintsho lokuhlunga uwoyela nowoyela, kanye nokuhlolwa kwamabhuleki okwephula amabhuleki, ama-piston, amakhebuli, ama-levers, ama-pivots, ama-wheel bearings, amalambu angaphambili, ukusebenza kwamaketanga nokucindezela kwamathayi, phakathi kokunye. Itkufanelefuthifaka phakathiukuhlolwa komgwaqo.07.01.2021
Kubiza malini ukugcinwa kwamabhayisikili?
Ukufaka amaphuzu ku-izindleko zesondlo, weza neizindleko ezijwayelekilekaibhayisikiliubunikazi be- $ 100 kuya ku- $ 300 ngonyaka. (Bheka isigaba 5.1. 9 lapha.) Okunye ukulinganisela kuyahlukahluka, kepha ngaphandle kokuphambukela kude nalolu hlu.21.02.2017
Ayini amamayela aphezulu webhayisikili?
Noma yini engaphezulu kwama-25,000Izinkulungwanekwezemidlaloibhayisikilikubhekwaphezulu.
Kungani abantu befuna ukuthenga izingxenye zebhayisikili?
Nganoma yisiphi isikhathi sonyaka nanganoma yiluphi uhlobo lokuhamba ngebhayisikili. Ngobusuku obuthile enkantini, ngo-1997, abafundi ababili be-RWTH Aachen mechanical engineering baveza umqondo wokuthi bathole inkampani eku-inthanethi ezothumela izingxenye zebhayisikili nezinye izinsimbi. Kungani? Ngoba bobabili babengabashayeli bamabhayisikili abanothando.
Bangobani abasunguli bezinto zebhayisikili?
Ngenhlanhla, akudingeki ngempela ukuba sicabange impilo ngaphandle koMgwaqo, iGravel, iNtaba, Izingane 'noma ama-E-Bikes. Konke ngenxa yabasunguli bezinto ezimbili zamabhayisikili uhlelo lukaMarcus Wenkel noKlaus Hoenig lokuphakela abashayeli bamabhayisikili abanentshisekelo ngezinto ezibalulekile emabhayisikili abo, konke kusebenze kahle iminyaka engaphezu kwengu-20.
Luhlobo luni lwezinto ibhayisikili lezintaba iShimano elinazo?
Ngenkathi iShimano nayo ikhiqiza inqwaba yezinye izinto, kufaka phakathi izibambo, iziqu nezikhala zezihlalo (ikakhulukazi ngaphansi kohlobo lwayo lwe-PRO), kanye nezingubo, izigqoko zamehlo, izikhwama nezicathulo, iShimano yaziwa kakhulu ngamaqembu ayo amabhayisikili asezintabeni.